Amadombolo wesifo sikashukela sohlobo 2 > Ukudla ngesifo sikashukela
Amadombolo wesifo sikashukela sohlobo 2
Hlukanisa phakathi kwesifo sikashukela esincike ku-insulin sohlobo lokuqala nesoshukela esincike ku-insulin sohlobo lwesibili. Esimweni sokuqala, isiguli sidinga imijovo ye-insulin yokwenziwa, ngoba ngasizathu simbe iyeka ukuhlangana kumaseli we-pancreas. I-insulin yi-hormone ebalulekile ebandakanyeka ekwehlukaniseni ushukela, ongena emzimbeni womuntu ngokudla.
Lapho kungenakwenzeka ukucubungula i-glucose etholakala ngokudla, umuntu angaba nokuhlaselwa kwe-glycemic (kufiphala, ikhesa). Esikhathini sikashukela sohlobo lwesibili, i-insulin ikhiqizwa ngenani elifanele, kepha ayifezi umsebenzi wayo ngenxa yokuphazamiseka ezinqubweni ze-metabolic. Ngokuvamile, isifo sikashukela sohlobo 2 sibonwa kubantu abakhuluphele abaye bathikameza imisebenzi ethile ye-endocrine.
Umqondo wamayunithi wesinkwa we-XE athuthukiswe ukwenza lula ukubalwa kwama-carbohydrate adliwayo. Ingxenye eyodwa yesinkwa ilingana nama-gramu ayi-12 ama-carbohydrate nama-kilojoule angama-48. Lesi sikhombisi singakwazisa kusengaphambili ukuthi lizokwenyuka kanjani ushukela we-glycated ku-plasma ngemuva kwesitsha esithile, futhi, ngokufanele, kuzosiza ukulawula kahle isenzo se-insulin.
Ukuze ulondoloze amazinga kashukela ajwayelekile kwisifo sikashukela esincike ku-insulin, kuyalulekwa ukuba ungadli ama-unit wesinkwa angaphezu kuka-7 ngasikhathi.
Isifo sikashukela sifaka ukuphulwa hhayi kuphela kwe-carbohydrate metabolism, kodwa futhi nokufakwa kwamafutha emzimbeni. Amafutha awacutshungulwanga ngokuphelele futhi afakwa ngesimo samabala ezimpawu ezindongeni zemithambo yegazi. Lokhu kuholela emiphumeleni emibi ngendlela yokushaywa unhlangothi nokushaya kwenhliziyo. Ukudla okunempilo nokudla okunempilo ekudleni kuzosiza ukukugwema.
I-cholesterol "embi" itholakala emikhiqizweni yezilwane. Okuyingozi kakhulu kuyo inyama enamafutha no-ukhilimu omuncu. Onke amanoni abonakalayo avela enyameni kumele asuswe, isikhumba enkukhuni esisuswe ngaphambi kokupheka. Izinhlanzi ezinamafutha nazo ziyadla, azinconywa. Amaqanda ane-yolk akadliwe zingadluli izicucu ezimbili ngesonto.
Umhluzi wenyama kufanele ubiliswe ngezinyathelo ezimbili. Ngemuva kokubilisa, susa igwebu kusuka kumhluzi, vumela inyama ukuthi ibilishe kancane, bese uyayihlanza umhluzi, hlamba inyama ngaphansi kwamanzi abandayo, uthele amanzi abilayo ahlanzekile bese uqhubeka nokupheka.
Stew namasoseji kungadliwa ngezikhathi ezithile. Uma kungenjalo kaningi, kuba ngcono empilweni. Kunoma yikuphi amasoseji nososeji eningi yamafutha nosawoti.
Phakathi kwemikhiqizo yobisi, khetha ukudla okunamafutha amancane. Ebisini - ngama-1.5% amanoni, ku-cottage shizi - 0%, ku-kefir - 1%.
Ukhilimu omuncu wokuqukethwe kwamafutha akuvunyelwe. Imikhiqizo eqediwe kusukela esitolo kubantu abanesifo sikashukela ayivunyelwe.
Ungawethembi umbhalo obhalwe ephaketheni. Pheka wena.
Ibhotela kumele itshintshwe nemifino. Kepha khumbula, yize ingenayo i-cholesterol, iphakeme kakhulu kumakhalori.
Ngakho-ke, kuyadingeka ukukhawulela ukusetshenziswa kwayo kuma-spoons ambalwa ngosuku. Kungaba ukugqoka isaladi noma iphalishi.
Ukuze ungathosi emafutheni, imifino noma isitshulu semifino.
Iresiphi yezinsimbi etholakalayo yesifo sikashukela
Uma usafuna ukudla ama-dumplings ngenyama yangempela, thatha inyama yokudla ye-turkey yenyama nengulube. Nansi iresiphi ngesitayela sakwamanye amazwe. I-tender iklabishi laseChinese liyanezelwa enyameni enezinhlamvu. Ine-fiber eningi, futhi ukugcwaliswa ngayo kuzoba namanzi. Isoso libuye lidliwe futhi lingadliwa cishe akunamkhawulo.
Ukulungiselela ukulahlwa okunjalo, imikhiqizo elandelayo izodingeka:
i-turkey fillet - 0.5 kg
isosi yesoya - 40 g,
uwoyela wesame - 10 g,
i-grated ginger izimpande - 2 tbsp. l
Iklabishi le-Peking lisikwe kahle - 100 g,
i-balsamic uviniga 0, 25 izinkomishi.
Dlulisa umucu wezinyoni ngokusebenzisa isigaxa senyama. Ungathengi i-mincemeat eyenziwe ngomumo, awazi ukuthi yenziwe ngaphi. Kw nenyama ebunjiwe engeza iklabishi eliqoshiwe, 1 tbsp. isipuni sejinja, inani elilinganayo le-soya sauce, uwoyela we-sesame.
Isinye sezitsha ezithandwa kakhulu cuisine yaseRussia zihlanganisa ama-dumplings. Akunakubalwa ngokudla kokudla, ngakho-ke kuvinjelwe ezinhlotsheni eziningi zezifo ezingamahlalakhona. Uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 sikashukela izinto okunzima ukuzilandisa.
Ngingadla ama-dumplings wesifo sikashukela sohlobo 2? Kunjalo, kodwa kuya ngemithetho ethile yokupheka. Izinketho ezithengiwe zemikhiqizo eseqediwe zinqatshelwe ngokuphelele ngamatafula angu-9 wokulashwa - ngisho inani elincane lingadala ukulimala okukhulu empilweni kweziguli ezinesifo sikashukela.
Imikhiqizo eqediwe ezethulwe ezitolo ingemikhiqizo enekhalori ephezulu enenkomba ye-glycemic ephezulu. Ngaphezu kwalezi zinkomba, kwenziwa amadombolo:
Kusuka kufulawa kakolweni weprimiyamu,
Inyama enkulu ekheniwe,
Inani elikhulu likasawoti, izithako zokuvikela izithako nezinongo.
Ngokubheka okungenhla, ngesifo sikashukela sohlobo 2, ungasebenzisa amadombolo alungiselelwe kuphela ngezandla zakho.
Ufulawa we-Wheat wenqatshelwe ukudala isivivinyo sokudonswa kwalesi sifo. Uma uyifaka esikhundleni se-rye, khona-ke ukunambitheka kwesitsha esiphelile kuzoba kungathandeki. Ngakho-ke, kunconywa ukuyixuba ngokulingana okulinganayo nezinye izinhlobo ezinenkomba ye-glycemic yazo evunyelwe sikashukela. Izinga eliphelele le-GI akufanele lidlule amayunithi angama-50, inhlama evela engxubevange kufanele ibe nokunwebeka, nokunambitheka okuthuthukile.
Ezinye zezinhlobo ezivunyelwe ukupheka yilezi:
Phakathi kwezazi zokudla, inhlanganisela efaneleke kakhulu ingxube ye-rye ne-oatmeal. Ngaphandle, umkhiqizo ophelile ubukeka umnyama kunombala ojwayelekile wombala kunama-dumplings atholakala kufulawa kakolweni weprimiyamu. Isitsha esiqediwe esisuka enhlama elilungiselelwe ngale ndlela ngeke sithinte izinga lokuxineka koshukela ohlelweni lokujikeleza.
Kunzima kakhulu kuzo zonke izinhlobo zenhlama kubhekwa njengengxube yefilakisi nefulawa ye-rye. Ukunamathela okwandayo kokuokuqala kuholela ekuxineni kwenhlama, futhi umbala wayo onsundu ubangela ukuba okudonswayo kupende kucishe kube mnyama. Uma ungacabangi ukubukeka okungajwayelekile kanye nokuncipha kukhipha inhlama, khona-ke ezigulini ezinesifo sikashukela le ndlela izoba usizo kakhulu.
Kuzo zonke izinhlobo zikafulawa, inkomba yamayunithi esinkwa ayidluli okujwayelekile okuvunyelwe ngabachwepheshe, aqukethe inani elincane lama-carbohydrate. Inani eliqondile le-XE lincike ngqo kuhlobo lwefulawa esetshenziswe lapho kulungiswa.
Iresiphi yeklasikhi yokulungiselela ukugcwaliswa ifaka inyama yenkomo nengulube exutshwe nengxube ye-anyanisi oqoshiwe kanye nama-clove egalikhi. Isitsha sokugcina siphenduka sibe ngamafutha ngokweqile, okusho ukuthi azifanele iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus (zombili izinhlobo zokuqala nezesibili).
Ukudla konke, okubandakanya imikhiqizo yenyama, kulungiselelwe njengengxenye yokudla kwabanesifo sikashukela. Ithebula lokwelashwa lisho ukuthi kungafakwa noma kuvinjelwe noma ikuphi ukudla okwamafutha okungakhuphula izinga le-cholesterol egazini lalowo onesifo.
Ithebula lokudla lenqabela ngokwezifiso ukusetshenziswa kwe:
Iresiphi yendabuko yokulahlwa lapho kudliwa kwenziwa izinguquko ezinkulu. Njengemikhiqizo eyinhloko efanelekile yokwenziwa kokugcwaliswa, sebenzisa:
Inyama emhlophe yofudu, inkukhu,
Izinhlobo ezahlukahlukene zamakhowe,
Imifino emisha - i-zucchini, i-zucchini, iklabishi emhlophe, iklabishi yaseBeijing,
Ingulube, inhliziyo yenkomo, izinso, amaphaphu,
Izinhlobo ezahlukene zezinhlanzi - ngokuqukethwe okunamafutha amancane.
Ngokukhetha okulungile kwemikhiqizo yenyama, ama-dumplings aphekwe ngeke awulimaze umzimba futhi ngeke aphoqelele ushukela wegazi ukundizela phezulu.
Ukudla kilojoule ephansi yohlobo 2 sikashukela
Ithebula lokudla i-9 noma i-9a lidume ngokubizwa ngokuthi yi-low-carb ekudleni. Ukudla okunjalo akulungile hhayi kwabanesifo sikashukela kuphela, kodwa nakulabo abaphupha ukulahlekelwa amakhilogremu angeziwe ngaphandle kokulimaza impilo yabo. Ngaphezu kwesifo sikashukela, lokhu kudla kunqunywe ngudokotela we-pathologies yezinhliziyo nemithambo yegazi.
Amaphuzu aphambili ekudleni:
Umgomo oyisisekelo wokudla kwabanesifo sikashukela ukubala amayunithi wesinkwa bese ukhetha ukudla okunenkomba ephansi ye-glycemic.
Ukudla, imenyu yesonto, onesifo sikashukela sohlobo 2 kuhlale kune-drawback eyodwa enkulu - ukukhishwa okuphelele ekudleni kwazo zonke izinhlobo zezithelo. Kukhona okukodwa kuphela - ukwatapheya.
Ukuvinjelwa okunjalo empeleni kuyindlela edingekayo. Ukudla okungenazithelo kunganciphisa futhi kulondoloze amazinga evamile kashukela.
Uhlu lwemikhiqizo yezitshalo enqatshiwe alilukhulu, okulandelayo akufakiwe kwimenyu:
Zonke izithelo (nezithelo zika-citrus nazo), amajikijolo,
I-anyanisi ebilisiwe. Ingadliwa iluhlaza ngamanani amancane,
Utamatisi nganoma yiluphi uhlobo ngemuva kokwelashwa okushisa (lokhu kufaka amasosa no-pastes).
Noma yisiphi isithelo sikashukela kufanele sikhethwe ngokucophelela. ngoba bona, njengamajusi wezithelo, banoshukela olula nama-carbohydrate, asetshenziswa cishe ngokushesha kube ushukela, okwandisa kakhulu ukuhlangana koshukela.
Akumangazi ukuthi ngohlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela, lokhu kudla kufanele kube ngaphandle kwemikhiqizo ejwayelekile yabanesifo sikashukela. Lokhu kusho imikhiqizo yezitolo ezikhethekile.
Ukudla okunjalo kuqukethe ama-carbohydrate amaningi, okuvimbela umzimba ekushiseni ngokuphelele kwamafutha bese ukuwafaka kumandla awusizo.
Isiguli ngasinye singazakhela sona izindlela zokudla ezilungele uhlobo 2 sikashukela. Lokhu kudinga:
Yazi ukuthi likhuphuka kangakanani ushukela we-mmol / l ushukela kusuka ku-1 gram yama-carbohydrate.
Yazi inani elithile lama-carbohydrate ngaphambi kokudla lokhu noma lowo mkhiqizo. Ungasebenzisa amatafula akhethekile kulokhu.
Sebenzisa imitha kashukela wegazi, ukukala ushukela wegazi ngaphambi kokudla.
Sindisa ukudla ngaphambi kokudla. Badinga ukudliwa ngamanani athile, ngaphandle kokuphula okujwayelekile.
Usebenzisa i-glucometer, kala ushukela ngemuva kokudla.
Qhathanisa ukuthi izinkomba zangempela ziyehluka kanjani kumqondo.
Sicela wazi ukuthi ukuqhathanisa imikhiqizo kuyinto eza kuqala.
Emkhiqizweni ofanayo wokudla, kepha othengwe ezindaweni ezihlukile, kungahle kube khona inani elihlukile lama-carbohydrate. Kumatafula akhethekile, kuvezwa idatha emaphakathi yayo yonke imikhiqizo.
Lapho uthenga imikhiqizo eseqediwe ezitolo, kufanele uqale utadishe ukwakheka kwayo.
Kubalulekile ukwenqaba ukuthenga ngokushesha uma umkhiqizo uqukethe okulandelayo:
I-Maple noma i-Corn Syrup
Lezi zinto ziqukethe inani eliphezulu lama-carbohydrate. Kepha lolu hlu aluphelele.
Ukuze ukudla okune-khalori ephansi kube okuqinile, kubalulekile ukutadisha ngokucophelela imininingwane esephepheni. Kubalulekile ukubona inani eliphelele lama-carbohydrate ngamagremu ayi-100 omkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, uma kunethuba elinjalo, kuyadingeka ukuthi uhlole inani lezakhi ezikhona kumkhiqizo ngamunye.
Imininingwane Esebenzisekayo Yesifo Sikashukela
Kuyadingeka masinyane ukucacisa ukuthi ama-dumplings athengiwe, iningi lawo ajwayele ukulidla ngesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo amathoshi angenakweqa. Azikwazi ukudliwa yize kuncane kakhulu. Lokhu kuyingozi hhayi kuphela ngokuqukethwe kwekhalori ephezulu noma inkomba ye-glycemic efanayo, kodwa futhi ngoba aqukethe izinto ezinjengalezi:
inyama enamafutha noma ekheniwe,
usawoti (ngamanani amakhulu kakhulu).
Kodwa-ke, kunezindaba ezinhle, eziqukethe ukuthi kukhona umkhiqizo omnandi owethulwe osengenzeka. Kepha kuphela ngesimo esisodwa - bayobe bezilungiselele ngokuzimela ngokubhekelwa ngokuphelele kwemithetho. Bazachazwa ngokuhamba kwesikhathi.
Ungasilungisa kanjani isisekelo esivivinyweni
Ngenqubo yokulungisa isidlo esichaziwe, bonke omama abasebenzisa ufulawa wesigaba esiphakeme kuphela. Kodwa-ke, ingabe isetshenziselwa ushukela, uhlobo lokuqala nolwesibili. Impendulo ayithandeki - labo ababhekene nokugula okuvezwayo kufanele bayilahle, ngoba inenkomba ye-glycemic ephezulu kakhulu.
Kufanele futhi kuqashelwe ukuba khona kwama-carbohydrate acolisisiwe asesivivinyweni. Zithakwa ngokushesha futhi unomphela emzimbeni wesitho esinjengamathumbu. Iphinde ibangele ukwanda okukhulu kwesilinganiso soshukela wegazi. Ngemuva kwalokhu, ukukhiqizwa kwe-insulin okusebenzayo kwenzeka bese kuthi futhi izinga likashukela linciphe - konke lokhu kulimaza kakhulu nganoma uluphi uhlobo lwesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, ngokushesha ngemuva kokudla okunjalo, umuzwa wendlala uqala ukuzwakala.
Yini engenziwa ngalokhu? Inketho enhle nefanele kunazo zonke kungaba ukusebenzisa irayisi esikhundleni sikafulawa kakolweni. Kubonakala ngezinga eliphansi kakhulu lokuqukethwe kwekhalori nenkomba ye-glycemic. Kulokhu, kuzosiza kakhulu isifo sikashukela sohlobo lokuqala nolwesibili.
Ngaphandle kokukhetha, wonke umuntu ujwayele iqiniso lokuthi ungadla isidlo esivelisiwe ngesengezo senyama. Kuyaphawuleka futhi ukuthi ngale njongo, ukwakha ukugcwaliswa okumnandi, inyama yenkomo ixubene nengulube ukuyenza ibe namanzi kakhulu. Kwabanesifo sikashukela, ukudla inyama ngenhlama yengeziwe futhi, yebo, amafutha angenasidingo.
Ngaphezu kwalokho, esimweni sokufunda kahle inyama exutshwe nenhlama, ubungozi bokuthi kwakhiwe izingwevu okuthiwa yi-atherosclerotic plaque ziphezulu kakhulu. Lokhu akunakugwenywa ngokoqobo futhi kuwumgwaqo oqondile wokushaywa unhlangothi, ikakhulukazi nganoma uluphi uhlobo lwesifo sikashukela.
Ukuze ugweme lokhu, ungazama ukwenza ukugcwaliswa ngokufakwa kwemikhiqizo ewusizo njenge:
inhlanzi yolwandle noma yolwandle,
Lokhu kuzogcina kungezukuzuzisa futhi kube okunempilo kakhulu kwisifo sikashukela ngasinye, kodwa futhi kuzosiza ekunciphiseni ukulimala kumadombolo.
Wonke umfazi wendlu uyazi ukuthi lapho isosi liqine ngokwengeziwe, kuyoba mnandi kakhulu ukunambitheka okutholakalayo esitsheni. Kodwa-ke, kunconyelwa ukuyisebenzisa kuma-dumplings, alungiselelwe ngokukhethekile isifo sikashukela sohlobo lokuqala nolwesibili.
Usawoti uyingozi kulokhu, kanti ne-sodium chloride ifakiwe ohlwini lwezithako.
Nguye ophethe emzimbeni womuntu inani eleqile loketshezi. Ngakho-ke, i-sodium chloride ivusa ukwanda okukhulu komfutho wegazi.
Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi izinkathi eziyizintandokazi ezifana ne-ketchup nemayonnaise nazo azihambelani. Lokhu kwenzeka ngenxa yezici eziningi: kuqala ngokuqukethwe kwabo kilojoule obalulekile futhi kugcina kunomphumela olimazayo emgodini wokugaya ukudla.
Kodwa-ke, ungangezela kuma-dumplings isibalo esikhudlwana sezinongo zemvelo yemvelo, kanye namakhambi. Uma sikhuluma ngososo, ketchup nemayonesi, khona-ke isiphuzo selamula singasetshenziswa. Kuzoba wusizo kakhulu kushukela waluphi uhlobo.
Ukuze upheke abanesifo sikashukela, kepha kulokhu akukho okudumayo okungatheni, uzodinga izithako ezilandelayo:
umdubuli we-turkey, cishe uhhafu wekhilogremu,
usoso olukhanyayo, cishe wezipuni ezine,
uwoyela wesame, isipuni esisodwa,
ginger gated, wezipuni ezimbili,
Iklabishi yaseChinese, inqunywe kuqala, amagremu ayi-100,
inhlama yohlobo olunamafutha amancane, ehlanganisa ufulawa wonke, amagremu angama-300,
uviniga webhalsamu, amagremu angu-50,
wezipuni ezintathu zamanzi.
Inqubo yokulungisa la ma-dumplings, angahle adliwe ngesifo sikashukela hhayi kuphela sokuqala, kodwa futhi nohlobo lwesibili, iqala ngeqiniso lokuthi i-turkey fillet kufanele idlule nge-grinder ekhethekile yenyama. Kuyiqiniso, ungathenga i-mincemeat eyenziwe ngomumo, kepha ivame ukulungiswa kusuka ezikhungweni nasemikhiqizweni yokubaluleka kwesibili.Kulokhu, kuvela ngaphezu kwesibindi. Lokhu akunakubekezelelwa kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela.
Ngemuva kwalokho, esitsheni esikhethekile, hlanganisa inyama egayiwe, engeza inani elikhonjisiwe le-soya sauce, uwoyela owenziwe ngembewu yesame, kanye ne-ginger encane egayiwe kanye neklabishi le-Beijing elikhethwe kahle.
Sebenzisa inhlama eyenziwe kahle eyenziwe ithengwe esitolo. Kodwa-ke, uma kunesifiso esinjalo futhi ngisho nethuba, khona-ke ungenza inhlama ye-dumplings ngezandla zakho. Ufulawa grey ongafundisiwe ungcono kakhulu kulokhu. Idinga ukusatshalaliswa kancane, lapho-ke kuzodingeka ukuyisika ibe yimibuthano. Ukugcotshwa kunezela kule ngxenye elandelayo: kweyunithi elilodwa lomkhiqizo, ithisipuni elilodwa le-turkey yomhlaba. Le ndlela asetshenziswa kakhulu ushukela ohlotsheni lokuqala nolwesibili.
Ngemuva kwalokho, kuzodingeka ukubeka amadombolo ephepheni elikhethekile bese ubeka esiqandisini. Iphepha kufanele likhiqizwe.
Ukuze ikwenze kube lula ukupheka, ama-dumplings kufanele ahambe kancane, kepha aqandiswe. Ngemuva kwalokho ungaqhubeka ngokuhambisana nezinketho ezimbili: ubilise emanzini noma ulungiselele umusi. Zombili lezi zisebenza ngokufanelekile ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2.
Uma ukhetho lwesibili lukhethiwe, khona-ke ungapheka ama-dumplings ngokwesiko laseMpumalanga, okungukuthi, phansi kwe-boiler ephindwe kabili kuzodingeka ubeke amaqabunga eklabishi.
Ukukhishwa okulungiselelwe ngale ndlela ngeke kunamathele, futhi iklabishi lizobanikeza ukunambitheka okuthe xaxa kakhulu. Kumele kuqashelwe ukuthi isitsha esine-steamed akufanele sipheke kungabi ngaphezu kwemizuzu engama-8-10, kuya ngenyama kanye nobukhulu benhlama.
Ngemuva kwalokho kuhlala kuphela ukulungiselela isosi ekhethekile ye-ravioli. Ukuze wenze lokhu, kungakuhle ukuxuba u-60 ml weviniga we-balsamic, isipuni esisodwa se-catfish sauce, kanye nezipuni ezintathu zamanzi kanye nesipuni esisodwa sejinja eligayiwe. Ngemuva kwalokhu, ama-dumplings angabhekwa njengalungele ngokuphelele. Kungcono ukuthi uzisebenzise sikashukela sanoma yiluphi uhlobo ezingxenyeni ezincane, ngaphandle kokulinda i-satellite ephezulu.
Ngakho-ke, abanesifo sikashukela kudingeka bakhumbule ukuthi ukusetshenziswa kwama-dumplings akuyona into efiselekayo ekuguleni kwabo. Kodwa-ke, kungaphezu kokumukeleka uma kuphekwe ekhaya ngokuhambisana neresiphi.
Kungenzeka yini ukudla amadombolo kashukela
Njengoba sekushiwo, umuntu uvunyelwe ukusebenzisa ama-dapter okwenziwe ekhaya, ngoba okulahlwa kwesitolo akulungile empilweni. Imikhiqizo eqediwe ngo-Semi ivunyelwe kulabo bantu abangenazo izinkinga zokugaya noshukela wegazi. Ngasikhathi sinye, lo mkhiqizo noma kunjalo unomphumela omubi enhlalakahleni, ngoba ikhwalithi yezithako ayithokozi, futhi izithasiselo ezahlukahlukene zenza isimo sibe sibi kakhulu.
Vele, isidlo esenziwe ekhaya sisiza kakhulu, ngoba umuntu akakwazi ukungabaza izakhi. Ngenxa yalesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukuthi ungabeki isikhathi nesikhathi sokubumba ngokwakho. Kulokhu, ngeke kulimaze impilo, ngoba zonke izincomo zabantu abanesifo sikashukela zizonakwa.
Kubalulekile ukuthenga uhlobo oluvikelekile lwefulawa egunyazwe iziguli. Ukuqashelwa ikakhulukazi kufanele kukhokhwe ekugcwalisweni ukuze inkomba ye-glucose ingakhuphuki ngokuhamba kwesikhathi. Ngokwesifo sikashukela sohlobo 2, kufanele upheke ama-dumplings usebenzisa ubuchwepheshe obukhethekile ukuze ungalimazi inhlala-kahle yakho.
Iziguli zenqatshelwe ukusebenzisa ufulawa kakolweni ngenhlama. Ngesikhathi esifanayo, ayikwazi ukushintshwa ngokuphelele ne-rye, ngaphandle kwalokho isitsha sizoba nokunambitheka okungathandeki. Kuvunyelwe ukwengeza ufulawa welayisi, ngoba unenkomba ephansi ye-glycemic. Isixazululo esifanele ukuhlanganisa izinhlobo eziningana zikafulawa ezivunyelwe kwabanesifo sikashukela. Isibonelo, ungangeza i-rye, amaranth ne-oat, ngoba lezi zinhlobonhlobo zihlangana kahle.
Abanye abantu banquma ukwenza inhlama ngokususelwa kufulawa owenziwe nge-rye ne-rye, kepha lokhu akuyona umbono omuhle. Indishi eseqediwe izothola umthunzi omnyama, futhi ibuye ibe minyene futhi inamathele. Ngalesi sizathu, kungcono ukulandela iresiphi yakudala yesifo sikashukela, ukuze umkhiqizo ophelile awusebenzi kuphela, kepha futhi unambitha.
Ukugcwaliswa kungahluka kakhulu, ngakho-ke umuntu angakwazi ukukhetha ngokuzimela ukuthi iyiphi inketho efana kakhulu. Imvamisa inyama yenkomo nengulube kuhlanganiswe ngokulinganayo, ngenkathi ingeza inani elikhulu lezinongo. Ukudonswa kwenkukhu nezinhlanzi kwenziwa kancane kancane, futhi imifino ifaka imifino ngaphakathi kwenhlama.
Abanesifo sikashukela kudingeka baqaphele ikakhulukazi lapho bekhetha ukugcwaliswa. Kufanele ivumelaniswe nesimo sayo sempilo ukuze ukudla kungalimazi umuntu. Kuvunyelwe ukwenza ingxube yenhliziyo, amaphaphu, isibindi nezinso. Kuvunyelwe ukwengeza i-veal ngamanani amancane.
Ngenye indlela, ungenza inyama egayiwe kusuka ku-turkey nenkukhu, ngoba lezi zithako ziwusizo koshukela. Ngaphezu kwalokho, kuvunyelwe ukwenza isisekelo kusuka ezinhlanzini, ngokwesibonelo, kusuka ku-salmon, kepha ngasikhathi sinye udinga ukukhetha izingcezu ezinamafutha aphansi. Abanye abantu bangeza amakhowe ekugcwaliseni ukwenza isidlo sinambitheke futhi singavamile.
Uma isiguli sineminyaka engaphezu kwengu-50 ubudala, khona-ke kunconywa ukuthi sipheke umkhiqizo ngeklabishi noma ngeparsley. Le iresiphi ithathwa njengewusizo futhi ephephile, ngakho-ke kufanelekile impela ukulungiselela. Kulesi simo, awukwazi ukudla izimbokodo kaningi. Zingadliwa ngokwesilinganiso amahlandla ama-1-2 ezinsukwini eziyi-7 uma lesi sifo singandi.
Abantu abaningi bathanda ukusebenzisa ama-dumplings ngamasosi, ngokwesibonelo, nge-mayonesi noma i-ketchup. Abanesifo sikashukela abavunyelwe ukwengeza okunjalo, ngoba kuthinta ushukela kabi. Ngaphezu kwalokho, usawoti ugcina uketshezi emzimbeni futhi uholela ekugxumeni ngomfutho wegazi.
Ukuvimbela imiphumela emibi, kunconywa ukusebenzisa kuphela izinongo zemvelo. Ngamanani alinganayo, ungangeza ujusi kalamula kanye namakhambi amasha. Kulokhu, isidlo sizoba usizo kakhulu futhi siphephile empilweni.
I-Exclusive Diabetesic Dumplings Recipe
Abantu abanesifo sikashukela kufanele bazenzele ama-dumplings ngokwabo, bagxile kwindlela yokupheka enempilo. Esimweni esinjalo, uzothola isidlo esimnandi esingaholeli ekuwohlokeni inhlala-kahle.
Isoso le-Soy - nezinkezo ezinkulu ezi-4.
I-Turkey - 500 amagremu.
Ujinja owabiwe - 2 wezipuni.
Iklabishi yaseBeijing - amagremu angama-90.
Inhlama - 300 amagremu.
Kusetshenziswa ufulawa welayisi ekuhlolweni, okuhlanganiswa namanzi, iqanda lenkukhu nosawoti. Kugwazwa kuze kutholakale isigaxa esingenamaqhubu. Ngemuva kwalokho, udinga ukuyikhipha kahle futhi wenze ama-mugs osayizi abaphakathi.
Ukufakwa ngaphakathi kufakwe engcebeni ku-grinder yenyama, kuxutshwe neklabishi eligayiwe. Qiniseka ukuthi wengeza i-ginger, i-soy sauce kanye ne-sesame oil. Zonke izakhi zixutshwe kahle, emva kwalokho ungaqhubeka nokutwebula.
Kubekwa ibhola enezinhlamvu embuthanweni olungiselelwe, emva kwalokho umkhiqizo ubekwa uphawu ngokucophelela. Kubalulekile ukuthi inyama ingahambi emaphethelweni, ngaphandle kwalokho indishi izowa ngaphandle ngesikhathi sokupheka. Ukufakwa okwenziwe ekhaya kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 kungafakwa esiqandisini ukuze kugcinwe okulandelayo. Uma kunesidingo, adinga ukukhutshwa kuphela futhi abiliswe ngendlela evamile.
Ama-dumplings enziwe ekhaya acocekile kakhulu kunokuphakwa kwesitolo futhi ayilimazi inhlala-kahle yesifo sikashukela. Zingaphekwa ngokushesha izinyanga ezimbalwa ngaphambi, ukuze ungachithi isikhathi kumodeli. Zigcinwa kwifomu eqandisiwe isikhathi eside, ngenkathi impahla yazo enenzuzo ingashabalali.
Hlobo luni lwefulawa olufanele ukuhlolwa?
Kunqatshelwe ngokuphelele ukuthi uhlobo 2 lwesifo sikashukela luthenge i-ravioli yendabuko, i-varenyky, i-manti ezitolo ezinkulu, amathofi kanye nezindawo zokudlela. Isizathu sikhona lokuthi lezi zitsha zenzelwe abantu abanempilo enhle abangakudla noma yikuphi ukudla ngaphandle kwemiphumela. Izitsha ezinama-khalori aphezulu ngeke zithinte umuntu ophilile, futhi isitho somzimba esinokuphazamiseka kwemetabolic sizophatha kabi. Isifo sikashukela sidinga ukudla kokudla, okuhambisana nemithi, esiza ukukhulisa isikhathi sokuphila. Izinsimbi zohlobo lwe-2 mellitus uhlobo 2 zivunyelwe ukusetshenziswa uma isakhi ngasinye sihlolwa ngokucophelela ngokuzimela.
Ngokudonswa, njengezinye izinhlobo zenhlama, ezimeni eziningi, ufulawa kakolweni onenkomba ephezulu ye-hypoglycemic (GI) uthathwa. Kulesi simo, ufulawa kakolweni udinga ukushintshwa ngomkhiqizo ophansi we-GI. Ithebula libonisa izinhlobo zikafulawa kanye nenkomba yazo ye-glycemic:
Kungcono ukuxuba ufulawa we-rye ne-oatmeal, khona-ke inhlama izophuma ithambile futhi ibe nokunwebeka.
Ngohlobo 2 sikashukela, kusetshenziswa ufulawa ogama lakhe langaphansi kwama-50. Linokuqina okunamathelayo, futhi ngenxa yalokho, isisindo sizoba siqinile futhi sibukeke. Amadombolo, amadombolo, i-khanum ilungiswa ngenyama noma okunye ukugcwaliswa kufulawa we-rye. Hlanganisa ne-oatmeal noma i-amaranth (eyenziwe nge-shirika) ufulawa. Ukusuka ku-rye nefulawa ehlanganisiwe, isisindo esiningi ngeke sakhiwe, ukuvumelana kuzoba mnene, umbala ube mnyama. Uma umkhiqizo wokuqeda usulwe kahle, kuzophuma isidlo esijabulisayo.
Izibuko eziphezulu zesifo sikashukela
Imikhiqizo yenhlama ebilisiwe iboniswa ukugcwaliswa okuhlukahlukene. Ngokwamasiko wezwe lokudla komhlaba wezwe, imikhiqizo ehlukahlukene ingasetshenziswa njengokugcwalisa. I-forcemeat yokudliwa ekahle itholakala enyameni yenkukhu. Imvamisa, iningi lamafutha eliqongelela emilenzeni, kanti ne-brisket ilungele ukugcwalisa umkhiqizo ophelile. Kuma-dumplings, i-ravioli, i-khinkali ibeka inyama enekhalori ephansi:
Ukugcwaliswa okuhlukile kwe-ravioli izinhlanzi ezisontekile ku-grinder yenyama. I-salmon fillet efanelekayo, i-tilapia, i-trout. Kungenzeka wengeze amakhowe, iklabishi, imifino kusisindo senhlanzi. Isitsha sizophumela esiphundu, gourmet nokudla. Ukugcwaliswa kwemifino kuzokwenza ama-dumplings abe nempilo, ikakhulukazi ezigulini esezikhulile. Izinhlobo ezahlukahlukene zokugcwaliswa zihlanganiswa, ngenxa yalokho umzimba uthola inzuzo ephezulu.
Ukulahla Ukulahlwa Kokuphonsa
Amadombolo wesifo sikashukela kufanele aqukethe ukudla okunamafutha amancane futhi abe nenkomba ye-glycemic. Njengoba kushiwo ngenhla, inhlama yama-dumplings kumele ilungiswe kusuka kufulawa we-rye. Indlela yokulandelayo elandelayo ukuthatha:
ufulawa we-rye (3 tbsp.),
amanzi abilayo (1 tbsp.),
imbewu entsha yefilakisi esemhlabeni (2 tsp),
amafutha e-olive (4 tbsp. l.).
Flaxseed uthele amanzi abilayo bese ushiya isikhashana. Thela ufulawa esitsheni, uthele isixazululo esifudumele kusuka emanzini futhi usulwe i-flaxseed, engeza uwoyela we-olive, uxove okuningi okungaguquguquki okudingekayo. Ukhuphula ukuqina, bopha inqwaba ku-movie yokunamathisela bese ushiya ukulisebenzisa bese uxova. Le ndlela yokupheka ilungele ukudonswa kwamatshe okugcwaliswa okugcwele.
Ukufakwa kwe-dumplings enoshukela kufanele kube okunempilo futhi okumnandi, kepha hhayi okunamafutha, ushizi we-cottage uphelele.
Ukugcwaliswa kwendabuko kokudonswa ku-cottage shizi. Isisindo se-curd kufanele sibe sisha, hhayi esinamafutha, kodwa ngokupheka okuomile ngokulinganayo. Ukususa umswakama ngokweqile ku-curd, udinga ukuthatha isihlungo, usimboze nge-gauze bese ubeka i-curd. Ngemuva kwalokho faka umshini wokucindezela noma uwucindezele ngesandla sakho. Ngemuva kokuthi i-Whey iyeke ukugeleza, ungapheka isidlo. Ukuze ushizi wekotishi ungaboli ngenkathi upheka, kufanele ungeze iqanda lenkukhu kulo (amagremu ama-200 we-cottage shizi - 1 pc.).
Izilimo eziyizigaxa zamazambane zilungile ukugcwaliswa. Le imifino ihlanganisa i-zinc nama-glycans (ama-polysaccharides), ngakho-ke, izazi zezempilo zeluleka iziguli ezinesifo sikashukela ukuthi zingadli ngaphezu kwama-250 amagremu ngosuku. Ukuze wehlise izinga le-GI, ubilise imifino ekhasini. Ukwehlisa okuqukethwe kwesitashi, kunconyelwa ukwehlisa ama-tubers. Ukuze ucwilisa, faka amazambane amahora angama-9 emanzini at lokushisa lasekamelweni. Ngemuva kwale nqubo, imifino ibilisiwe bese kusetshenziswa amazambane athosiwe, asetshenziselwa ukugcwalisa imikhiqizo ehlukahlukene yasolwandle.
Yimiphi usoso osebenzisa abantu abanesifo sikashukela kuma-dumplings kanye ne-dumplings?
Kukhona amadombolo, futhi amadombolo kufanele abe nososo. Ukuthosa kwasekuqaleni kanye ne-gravy engeza izinongo esitsheni. I-marinade ebukhali, iba nambitheka ngokwengeziwe. Kodwa-ke, abanesifo sikashukela benqatshelwe ngokuphelele ukudla i-khinkali, i-ravioli, i-dumplings ene-imayonnaise noma i-ketchup. Amadombolo noshukela ahambelana impela uma ufaka imifino eminingi esitsheni bese usebenzisa ujusi kalamula esikhundleni se-gravy.
Amadombolo wesifo sikashukela sohlobo 2: kungenzeka noma cha?
Ngalesi sifo, amadombolo athengwe esitolo anqatshelwe ngokuphelele. Iqiniso ngukuthi umkhiqizo onjalo uphezulu kakhulu-amakhalori, unenkomba ye-glycemic ephezulu.
Ngaphezu kwalokho, amadombolo wesitolo aqukethe:
inyama ekheniwe noma ekhuluphele kakhulu
Kepha uma uzenza ama-dumplings ngokwakho ngezithako eziwusizo, okungukuthi, angakwazi.
Yikuphi okungenzeki futhi ngani?
Ubuchwepheshe bendabuko bokwenza lo mkhiqizo buhlanganisa ukusetshenziswa kofulawa kakolweni (imvamisa ebangeni eliphakeme kakhulu), ene-GI ephezulu futhi kuthuthukisa i-hyperglycemia.
Enye minus ukugcwaliswa, njengomthetho, kusuka engulube. Futhi ukusetshenziswa kwenyama enamafutha kushukela kuyingozi, ngoba kunomthelela ekuqokeleleni kwe-cholesterol emikhunjini futhi kungasusa i-atherossteosis namanye ama-pathologies.
Abantu abanesifo sikashukela bahlushwa yi-metabolism embi. Amafutha emzimbeni obuthakathaka awacutshungulwa bese eba imbangela yezinkinga ezahlukahlukene.
Izithako zeDumplings yesifo sikashukela
Ngisho nalesi sidlo asisiwona owusizo kakhulu kulesi sifo, singaphambukisa umsoco wokwelapha abanesifo sikashukela. Okubalulekile ukulungiselela kwayo okufanele. Ukwakheka kwama-dumplings kungokulandelayo: ufulawa wenhlama, inyama yokugcwaliswa nosawoti. Akukho neyodwa kulezi zithako efanelekile kushukela, okusho ukuthi isitsha kufanele silungiselelwe kuphela kusuka ekudleni okuvunyelwe ushukela.
Yikuphi ufulawa okufanele ukhethe?
Ukuze wenze inhlama engalimazi impilo yesiguli, udinga ukukhetha ufulawa ofanele. Kufanele abe nesibalo esiphansi. Ufulawa wamasondo ngokwezigaba awungeni. Ezitolo ungathola imikhiqizo eminingi yaphansi.
Ukuze wenze ukukhetha, kufanele wazi ufulawa we-GI wezinhlobo ezahlukahlukene:
ilayisi - 95.
ummbila - 70.
soya ne-oat - 45.
ukolweni - 85.
i-buckwheat - 50.
ithanga - 35.
i-rye - 40.
Esikhathini sikashukela, labo abanenkomba engaphansi kuka-50 imikhiqizo eyamukelekayo. Imvamisa, ufulawa onenkomba enjalo unamathela kakhulu, okwenza inhlama ibe nzima. Ngakho-ke, udinga ukusebenzisa inhlanganisela yezinhlobo ezahlukene. Isibonelo, ingxube ye-rye, amaranth ne-oatmeal. Inhlama kuleli cala izoba mnyama kakhulu, okungajwayelekile.
Kepha uma uyigingqa kancane, uthola umkhiqizo wokuqala wombala omnyama, owusizo ngokugula ushukela. Ama-dumplings wesifo sikashukela angalungiswa kusetshenziswa irayisi noma ufulawa wombila, kodwa ungakhohlwa ukuthi i-GI yawo ingu-95 no-70 ngokulandelana. Futhi lokhu kubalulekile.
Uyini umehluko phakathi kwe-dumplings kanye ne-dumplings, uyini umehluko phakathi kwe-manti ne-pose? Vele, ukugxusha.
Inyama enobisi (inhlanzi noma inyama), amakhowe, ushizi wekhotishi namazambane, iklabishi nengxube entsha yamakhambi kusongwe ngenhlama.
Ukugcwaliswa kungaba yinoma yini, kodwa okubaluleke - okumnandi. Futhi yikuphi ukwakheka okufanele kube nakho ukuze umuntu onesifo sikashukela asidle?
Kungcono, vele, kusuka enkomeni noma engulubeni, kepha ngokugula ushukela le mikhiqizo ivinjelwe ngenxa yokuqukethwe kwamafutha aphezulu. Kunesisombululo - udinga ukubuyisela inyama nge-offal. Inhliziyo ekudla kokudla ingcono kakhulu. Esikhathini sikashukela, ukugcwaliswa, kuhle ukusebenzisa izingxenye ezilandelayo: amaphaphu, izinso nenhliziyo ngokufakwa kwenani elincane lenyama elambile.
Ama-dumplings anjalo afanele abantu abanezinkinga zohlelo lokugaya. Ukuthungwa kuzothathwa njengokudla uma kulungisiwe kusuka enkukhu yenkukhu (inkukhu, iturkey). Ezinye izingxenye: amaphiko, imilenze ayisetshenziswa, ngoba inqwaba yamafutha iqongelela kuzo. Ngesizathu esifanayo, inyama ye-goose noma yedada akuvamile ukuthi iqhubeke nokulungiswa kokudla.
Izinhlanzi ezinama-Minced nazo zithandwa kakhulu. Okumnandi kakhulu kuzovela ku-salmon.
Ngesifo sikashukela, amakhowe angafakwa ekugcwalisweni okunjalo. Umphumela uba isidlo sokudla nesokugedla.
Ukugcwaliswa kungaba ngemifino, okuzuzisa kakhulu kwabanesifo sikashukela.
Kuhle ukusebenzisa izinhlanzi zasemfuleni nezasolwandle, imifino kanye neklabishi noma i-zucchini. Lezi zithako zinempilo futhi zinamakha, zingahlanganiswa ukuze kufinyelelwe ukunambitheka okungcono kakhulu nezinzuzo zomzimba.
Inyama yanoma yiluphi uhlobo ingumthombo wamaprotheni ezilwane adingekayo ekusebenzeni kwamaseli wezicubu. Kepha ngesifo sikashukela, inyama enamafutha iyaphikiswa, futhi kunconyelwa ukudla okunamafutha amancane. Ngakho-ke, i-turkey noma inyama yenkukhu yisisombululo esihle kakhulu sesifo.
Kepha lapho ulungiselela ukugcwaliswa okuvela kuwo, kubalulekile ukugcina imithetho elandelayo:
qiniseka ukuthi ususa isikhumba emzimbeni wesidumbu (uqukethe amanoni amaningi),
kungcono ukupheka noma ukuphakela inyoni. Ungapheka ungalokothi ugcobe,
iyingozi kwisifo sikashukela kanye nenkukhu,
kungcono ukuthatha inyoni encane (inamafutha amancane).
Ingulube, yize imnandi, kepha inamafutha kakhulu.
Kuvunyelwe ukuyidla kushukela kuphela ngamanani amancane. Inyama iqukethe uvithamini B1 namaprotheni amaningi. Into esemqoka ukukhipha amanoni engulube bese ufaka imifino eminingi: iklabishi nepelepele, utamatisi namakhambi.
Inyama enempilo kakhulu inyama yenkomo. Isebenza kahle kuma-pancreas futhi iqinisa ushukela wegazi. Izitho ezingezinhliziyo zenyama zilungele ngokuphelele ama-dumplings ukugxusha njengokungezelwa kwenyama nengulube.
Ukwenza ukunambitha okumnandi nakho kubalulekile kakhulu. Kwenza inkambo eyinhloko ibe yinhle futhi ithandeke kakhudlwana, ikakhulukazi usawoti omnandi. Kepha kwabanesifo sikashukela, lokhu kuthambekela kuphambene.
Ukulungiselela isoso lokudla kudinga ulwazi lwamaphuzu alandelayo:
uma ukuthosa kuqukethe i-sodium chloride, khona-ke umkhiqizo onjalo onesifo sikashukela uyingozi kakhulu,
awukwazi ukusebenzisa imayonnaise ne-ketchup (ngisho nangezinto ezincane),
kuyasiza ukufaka imifino ehlukahlukene kusoso,
isithokelo singasuselwa ku-yogurt enamafutha amancane.
Nazi ezinye izindlela zokupheka zokuqala ze-daps dumper sauce.
I-Cranberry Avocado Sauce:
Sula yonke into ngokusebenzisa ngesihlungo, hlanganisa, usawoti omncane.
Garlic isoso negalikhi:
isipinashi - 200 g
iparsley no dill - 50 g lilinye,
ugarliki - ama-4 clove,
Zonke izithako kumele zibe phansi ngenhlanganisela, zixube futhi zingafakwa nesitsha.
Ama-dumplings wesifo sikashukela alungiselelwe isikhathi eside, kepha isikhathi esisetshenzisiwe sizobuyela kuwe sisempilweni futhi ujabule. Okokuqala, inhlama ilungiselelwe.
Inketho enhle kakhulu ingaba ingxube yezinhlobo ezi-3 zikafulawa: i-rye, i-oat ne-amaranth, kepha irayisi nayo ilungile.
Kufanele ivinjelwe ukugcwalisa umoya-mpilo. Inani lefulawa linqunywa yi-hostess, kepha inhlama kufanele ibe nokunwebeka futhi ibenamanzi. Thela ufulawa etafuleni bese wenza impinda maphakathi nesiko lapho siphula khona iqanda lezinkukhu. Kancane kancane uthele amanzi kufulawa bese uvusa yonke into ngemfoloko.
Lapho inhlama ifakwa, igxotshwa ebholeni bese ishiyelwa ukuthi ibhalwe ngehora, imbozwe ithawula. Ukulungiselela ukugcwaliswa kwemifino, kusetshenziswe imifino ethosiwe noma ebilisiwe, uthathe izingcezu. Futhi inyama kanye no-anyanisi oqoshiwe kudingeka ukugoqa.
Khipha inhlama ngesendlalelo esincanyana bese usika imibuthano esijikelezweni oluyindilinga (ingilazi) - kungakanani okusebenzayo.
Bamba ingxenye esele (ngesimo sezinto ezilahliwe) bese uphinda usebenze.
Faka ukugcwaliswa maphakathi kombuthano ngamunye (1 tsp). Cindezela imiphetho bese uxhuma.
Amadombolo abilisiwe, afakwa emanzini abilayo, nakho okuhle ukufaka isipuni samafutha zemifino. Ngakho-ke okulahliweyo ngeke kunamathele ndawonye. Njengoba sezilungile, zithantazela ziye phezulu kwamanzi abilayo. Ngemuva kwalokho kufanele ibiliswe eminye imizuzu engu-1-2 futhi isuswe ngesipuni esitshiwe.
indali yezinhlanzi - 1 kg,
anyanisi - 200 g
uwoyela yemifino - 100 g,
ujusi 1/3 ulamula.
Ukugxila ngezimbabazane no-anyanisi:
nettle - 400 g
anyanisi - 1 pc.,
umhlabathi pepper ukunambitha.
Inkomba ejwayelekile yedplings glycemic ilingana amayunithi angama-60. Isitsha siqukethe i-cholesterol (ngokugcwaliswa kwenyama) - 33,7 mg, ngesilinganiso esivumelekile esingu-300 mg ngosuku. Ukuze kungakhuli isimo sezempilo uma kwenzeka kugula ushukela, kubalulekile ukwazi inani lomsoco walo mkhiqizo.
Ngakho-ke, ukulahlwa kwesifo sikashukela kusuka kukolweni nama-oat bran agxishwe izinkomba ze-veal (nge-100 g yomkhiqizo) kungokulandelayo:
amaprotheni - 10,9 g
amanoni - 2.8 g
carbohydrate - 14.4 g.
Lawa maxabiso aphansi izikhathi eziphindwe ka-2 kunalawo ama-dumplings athengiwe, okuwavumela ukuba adle ngesifo sikashukela ngaphandle kokwesaba.
Ngingadla ama-dumplings oshukela? Ungawapheka kanjani? Cishe konke kuvidiyo:
Amadombolo nesifo sikashukela imiqondo evumelana ngokuphelele. Isimo esiyinhloko ukuzpheka ngokwakho. Kungale ndlela kuphela lapho umuntu angaqiniseka ngokubaluleka nekhwalithi yezakhi ezisetshenziswayo ezingazukulimaza umzimba wesiguli.